गाउँमा दिउसै भुत, १७ बर्षपछी उस्तै घटना दोहोरिएको भन्दै गाउले डराए ! (हेर्नुहोस भिडियो)
अहिले हामी जसले पनि भुत, पिशाछ, तर्साउने कुराहरुको बिस्वास गर्दैनौ । हामी यस्ता कुराहरुलाई रुढीबादी मान्छौ । तर एउटा यस्तो घटना घटेको छ, जुन थाहा पाउँदा जो कसैलाई लाग्न सक्छ । के यो साच्चै हो । कसैलाई पत्यार नलाग्ने घटना भयो । एक १० बर्षिय बालिकालाई घर भन्दा ५०० मिटर टाढा जङ्गलमा लग्यो । बालिका रुदै, कराउदै बसिन गाउलेहरु खोज्न लागे तर उनिहरुले पत्ता लगाएनन । अर्कै गाउका एक ब्यक्तिले बच्चा काराएको छनि भनेपछी सोही स्थानमा गएर हेर्दा बालिकालाई देखेर ल्याए । तर घटना आखिर के हो भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय भुतको घटना नभएका होईनन, धेरै मानिसलाई आतंकीत पनि बनायो । ललितपुरको एक घरमा त्यस्तै तर्सौने, गमला फाल्ने, टिभी फुटाउने अदृश्य घटना भयो । अन्तत त्यो घटना मानवले नै घटाएको पत्ता लाग्यो ।
यो घटना रोल्पाको रुम्टिगडी गाउपालिका वडा न. ९ को हो । यहाँका स्थानियका अनुसार १७ बर्ष पहिले पनि यस्तै घटना घटेको थियो अहिके १७ बर्ष पछि फेरि यो घटना दोहोरियो । त्यस समयमा पनि यस्तै घटना घटेको थियो । त्यस समयमा साढे २ बर्षको बच्चालाई यसरी नै लगेको थियो । तर ती बालिका पनि २ दिन पछि सम्पर्कमा आएकी थिईन । भीषण बर्षा भएको त्यस समयमा पनि उनलाई केही भएको थिएन । उनी एक ओढारमा थिईन ।
यसपटक पनि १० बर्षिय मनिषा सार्कीलाई भाडा माझेकै स्थानबाट लिएर गएको बताईन्छ । बालिका भन्छिन “परबाट आएको देखेको थिए, भाग्न खोजे तर हात, गोडा लत्र्याक लुत्रुक परे, त्यसपछी कसरी लग्यो थाहा भएन” । उनको आन्टीपनी छुटाउन गएको तर कपाल समाएर छुटाउन नदिएको बताउछन । हामिले यो समाचार “समता टेलिभिजन” युट्युव च्यानलबाट लिएका हौ । “समता टेलिभिजन” युट्युव च्यानलमा दिएको एक अन्तरबार्तामा बालिका, आन्टी, शिक्षक लगायतले आ आफ्नो अनुभव सुनाएका छन । तर बास्तबिकता मा त्यो भुत नै थियो या अरु कुनै काल्पनिक कसैले घटाएका घटना हुन त्यो भने अझै थाहा हुन सकेको छैन ।
हेर्नुहोस यो भिडियो !